Eyoyikisayo ... Martech Zone
Kucace gca ukuba kwiimpawu kunye nabathengisi abajolise kwiiHalloween zemveli, ukusebenzisa iPinterest kunye neFacebook ukufikelela kuloo mmandla wabantu abadala kungangumdla wakho. Ngokuthelekisa, i-Instagram, i-Snapchat, kunye neTikTok zezona ziqonga zibalaseleyo ze "amava" eemveliso- ngakumbi ukuba ubonelela ngomtsalane kulo nyaka- kunye nabathengisi ukufikelela kwelo qela lincinci le-Halloween.
Ishelf, iHalloween Ngamanani
Amanani eHalloween aPhezulu kwaye aPhantsi
Iilekese iseyeyona nto idumileyo yokuyithenga ngeHalloween kunye nama-95% abantu ababhiyozelayo bathabathe usuku olukhulu.
Up -72% yababhiyozeli bahombisa amakhaya abo.
Up - Ababhiyozeli abatyelele izindlu ezixhonyiweyo benyuka ukusuka kwiipesenti ezili-18 ukuya kwiipesenti ezingama-22 kulo nyaka.
phantsi -Bambalwa abantu abaceba ukuchitha imali ezinxibe iimpahla, kunye namakhadi okubulisa.
Ukuziphatha kweHalloween kunye noZukulwana Z
Enye yeeseti ezinomdla kakhulu kwiShelf etsalwe kwi-infographic yazo ibonisa umahluko kwindlela IGen Zers phakathi kweminyaka eli-18 nama-24 babhiyozela iHalloween xa kuthelekiswa noluntu ngokubanzi.
Abantu abadala bakaGen Z abanamathuba okuba bahlale ekhaya kwaye badlulise iilekese kunomndilili weHalloween (iipesenti ezingama-56 zeGen Zers ziya kuyenza xa ithelekiswa neepesenti ezingama-66 zeHalloween ngokubanzi).
Nangona kunjalo, abantu abadala beGen Z kunokwenzeka ukuba banxibe iimpahla (73% xa kuthelekiswa ne-47%).
Abantu abadala bakaGen Z kungenzeka ukuba bandwendwele indlu enezindlu (40% kuthelekiswa ne-22%)
Abantu abadala beGen Z banamathuba okuba baye okanye baphose ipati (53% xa kuthelekiswa nama-32%).
tags: halloweenIvenkile yeHalloweenI-ICSCIBhunga lamaZwe ngamaZiko eeNtengisoTwilleyIsikhokelo semvelisoukubekwa kwemvelisoukubuyisela kwakhonaImidiya yokuncokolaUmxholo oveliswe ngumsebenzisiumdiliyayoutube